उपत्यका अवलोकन गर्ने धरहराकोे मुख्य बारदली बन्दै – Khabar Link
Khabar Link - Leading Online News Portal
उपत्यका अवलोकन गर्ने धरहराकोे मुख्य बारदली बन्दै
✍️ खबर लिंक	 प्रकाशित मिति: पुस १४, २०७७
सुन्धारामा निर्माण हुँदै गरेको नयाँ धरहराको काम तीव्र गतीमा अगाडि बढेको छ । बन्न लागेको २२ तलाको धरहरामध्ये २० तलाको लागि ढलान हुन लागेको हो । साथै उक्त तलाबाट काठमाडौं उपत्यका अवलोकन गर्ने बारदली बनाउने काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले गोरखापत्र अनलाइनलाई जानकारी दिएको छ ।
रमण कन्सट्रक्सनका आयोजना व्यवस्थापक श्यामचन्द्र श्रेष्ठले मुख्य आकर्षक रहेको २० तलाबाट अवलोकन गर्ने ठाउँको बारदली बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो । बाँकी दुई तल्लाको काम दुईदेखि तीन महिनाको बीचमा सम्पन्न हुने बताउनुभयो । तर धरहरालाई अन्तिम रुप दिने कामको लागि केही समय लाग्नेछ । धरहरा परिसरमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ, खानेपानीको पाइप, टेलिफोन, विद्युतीय लिफ्ट बनाउने, वाइरिङ, फिनिसिङ काम पनि भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
सुरुमा कोरोनाका कारण काममा केही असर परेको भए तापनि काम निरन्तर भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । कोरोना कारण लकडाउनको समय र दसैं तिहार चाड पर्वको समयमा पनि दिन र रातको समयमा काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।ठेक्का पाएको समयका आधारमा हामीले एक महिना अगावै सक्नु सक्नुपर्ने भए तापनि कोरोनालगायत काम गर्ने सिलसिलामा काम गर्ने साइट नपाएको कारण थप समय आवश्यक रहेको म्यानेजर इन्जिनियर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
२२ तला बन्ने धरहरा पहिलाको धरहराको शैलीमा बन्नेछ । तर पुरानै शैलीको भए तापनि नयाँ प्रविधिमा बनिरहेको निर्माण कम्पनीको बताएको छ । यो बन्दै गरेको धरहरामा बालुवा, छड, ईटा, डण्डी, सिमेण्टको सामग्री प्रयोग गरेर बनाइएको छ । तर माथि टपमा भने पुरानै धरहराको गजुर राखिने म्यानेजर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । पुरानै शैलीमा प्रत्येक तलामा झ्याल रहनेछ ।
नयाँ धरहरामा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गमैत्री बन्ने भएको छ । धरोहरा चढ्नको लागि हिँड्न नसक्नेको लागि दुई वटा लिप्टको व्यवस्था गरिएको छ । गाडी र बाइकको लागि पार्किङको सुविधा रहनेछ । चारसय साना गाडी र सातसय बाईक अट्ने क्षमताको पार्किङ बनिरहेको छ । साथै, खाजा र खाना खाने क्यान्टिनदेखि आराम गर्नको लागि बगैंचा रहनेछ ।
धरहरा चढ्न दैनिक तीनदेखि चार हजारको हाराहारीमा पर्यटकहरु आउने एक अनुसन्धानले बताएको व्यवस्थापक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । धरहराभित्रै रहेको सुन्धारालाई पहिलाको जस्तो पानी बग्ने बनाइनेछ । नेपालको पहिचान चिनाउने उक्त पुरानो ऐतिहासिक धरहरालाइ सफाइ गरेर पुरानै मौलिकतामा प्रयोगमा ल्याइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
रानीपोखरी र धरहरा पुनर्निर्माण, फर्केला पहिलाकै संरचनामा ?
रानीपोखरी र धरहरा पुननिर्माणको काम तीब्रगतिमा हुँदैछ । लामोसमयदेखि विवादित यी संरचना पुननिर्माण प्राविधिकरणले जिम्मा पाएसँगै निर्माणको कामले गति लिन थालेको हो ।
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले क्षति पुगेका यी संरचना ऐतिहासिक संरचना मानिन्छ ।
भुकम्पले निकै क्षति पु¥याएको यी संरचना नबन्ने हो की ? पहिलाकै जस्तो नहुने हो कि ? भन्ने आम चासोको विषय बनेको थियो ।
भूकम्प गएको १० महिना पछि २ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी पूनर्निर्माणको सुभारम्भ गरे पनि काम भने अघि बढ्न सकेको थिएन ।
पुननिर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरी आगामी १२ वैशाख अर्थात भुकम्प गएकै मिति र समयमा उद्घाट गर्ने गरी निर्माणको कामलाई अघि बढाएको पुननिर्माण प्राविधिकरण अन्तर्गत पुरातत्वविद् राजु मानन्धरले जानकारी दिए ।
पोखरी निर्माणको काम उपभोक्त समितिले निर्माण गर्दै आएको छ भने वाल गोपालेश्वरको मन्दिर, पूल र सौन्दर्यकरणको काम भने सि.एम.सी जेभीले गर्दै आएको छ ।
पोखरी निर्माणको काम झण्डै ५० प्रतिशत सकिएको उनले बताए । पोखरीमा माटो भर्न बढी समय लाग्ने भएकाले फागुन मसान्तसम्ममा पोखरी निर्माणको पाटो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
पोखरीमा हालिएको माटो खानीबाटै ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेकाले पोखरी निर्माणमा समय लागेको उनले बताए ।
त्यस्तै, रानीपोखरी भित्रको पूल निर्माण पनि ८० प्रतिशत सकिएको मानन्धरले जानकारी दिए । पुलमा १९ वटा ठूला प्वाल बनाउनुपर्नेमा १७ वटा बनिसकेको छ ।
मानन्धरका अनुसार चन्द्रशमशेरको पालमा पूनर्निर्माण गर्दा गुम्बज शैलिमा निर्माण गएिको मन्दिर भत्काएर पुरानै शैलिमा निर्माण गरिनेछ । मन्दिरको उचाई ५३ फिटको हुनेछ ।
धरहरा पुननिर्माण, ०७७ कत्तिकमा सक्ने भुकम्पले क्षति पु-याएको अर्को ऐतिहासिक संरचना धरहराको पुननिर्माण पनि यतिबेला तीब्र गतिमा भइरहेको छ । भूकम्पपछिका चार वर्ष विवादमै रहेको धरहरा केपी शर्मा ओलीले ‘मै बनाउँ छु, मेरो धरहरा’ भन्ने नारा अभियान समेत चलाएका थिए । अभियानको गति त्यति प्रभावकारी हुन नसकेपछि पुननिर्माण प्राविधिकरणलाई जिम्मा दिएको थियो ।
पुननिर्माण प्राविधिकरणले जिम्मा पाएपछि निर्माण तीब्रताका साथ अघि बढेको छ । वि.सं.१८८२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरीदेवीको सम्झना स्वरुप बनाएको उक्त धरहरा त्यसको एक सय आठ वर्षपछि वि.स. १९९० को भुकम्पले भत्किएको थियो । पूनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले भुकम्पले ढलेको दुई वर्षमै मौलिक स्वरूपमा धरहराको पुनःनिर्माण गराएका थिए ।
तर, अब भने पहिलाकै झै चुनढुङ्गाबाट मौलिक संरचनामा नभइ आधुनिक शैलीमा निर्माण हुन लागेको पुरातत्व विद् मानन्धरले जानकारी दिए ।हालसम्म छैटौं तल्लाको काम सकेर सातौं तला बनाउने तयारी भएको मालन्धरले बताए । २९ माघसम्ममा सातौं तलाको निर्माण सक्ने उनको भनाई छ । बाहिर हेर्दा जुद्ध समशेरले बनाएको जस्तो देखिएपनि पहिलेको भन्दा निकै भिन्न र आधुनिक हुने उनले जानकारी दिए । हाल बन्न थालेको धरहरामा दुई तला अन्डरग्राउण्ड कार पार्किङ छ । चढ्न झर्नका लागि ‘लिफ्ट’ राखिने छ ।
तर, पुरातत्व विद्हरूले भने धरहरा भित्र ‘लिफ्ट’ राख्न नहुने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । मालन्धरले भने ‘यसमा विरोध गर्नु कुनै तुक छैन, धरहरा विशुद्ध आधुनिक तरिकारले निर्माण भइरहेकोले यसलाइ जुन ढाँचाबाट पनि लैजान सकिन्छ ।’
मानन्धरका अनुसार हालसम्म रानीपोखरी पुननिर्माणमा ८ करोड र धरहरामा ८४ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले धरहराको पुननिर्माण २०७७ साल कात्तिक मसान्तसम्ममा सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पुननिर्माण प्राधिकरणले १२ वैशाखमा भत्किएको धरहराको ठुटोलाई सिसाले छोपेर म्युजिएमको रूपमा प्रयोग गर्नेगरी संचालनमा ल्याउने जनाएको छ । हाल बन्दै गरेको धरहरा पहिलाको भन्दा १० मिटर पर रहेको छ ।
सम्बन्धित More from author
युरियाको चरम अभाव हुँदा पनि धान उत्पादन बढेको दाबी
गाईभैँसीका भँडार फर्कने समस्यामा वृद्धि
वैशाखदेखि १५ मेगावाट विद्युत् सोलार प्लान्टबाट
देशभर पाँच सय १२ स्थानीय निकायमा पुग्यो उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड…
यो प्रस्तावित खबर लिंक मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित आधिकारिक समाचार पोर्टल हो। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कृषि, पर्यटन, स्थानीय सरकार, मनोरञ्जन, खेलकुदलगायतका विषय समावेश हुनेछन्।
काठमाडौँ महानगरपालिका ३५,
© 2021 - Khabar Link. All Rights Reserved.